သင်ကြိုးစားနေပုံရသည်၊ | Martech Zone
သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 22, 2006 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ဟုတ်ကဲ့! ဟုတ်ကဲ့! ဟုတ်ကဲ့! ဘာလို့လဲဆိုတော့ရူပ မင်းကြိုးစားနေသလိုပဲ” ရှေ ရေးသားခဲ့သည်။ ကျနော့်ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတစ် ဦး ကသူတို့နဲ့အတူကောင်းမွန်တဲ့ရာထူးတစ်ခုအကြောင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့မြို့အစည်းအဝေးတွေမှာမရှိပါဘူး။ ငါငြင်းခုံ, တောင်းပန်နှင့်တစ် ဦး ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ရန်သူနှင့်အတူတောင်းပန်လေ၏။ ၎င်းသည် ၀ တ်စုံသည်သင့်တော်သောလစာနှင့်အညီသင့်လျော်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ငါအရာအားလုံးကိုကြိုးစားခဲ့ ... မ budge ။
“ မင်းလုပ်ရမယ်” ​​လို့ငါပြောတယ်။
သူက“ ငါမေးတယ်၊ သူတို့အားလုံးဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ကြတယ်။
အခုတော့ခွင့်ပြုသူအများဆုံးဖွယ်ရှိကမ်းလှမ်းမှုကိုရလိမ့်မယ်။ သူ၏မယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းရည်၊ သူ၏ပင်ကိုစရိုက်၊ မောင်းနှင်မှုနှင့်သံသယတို့ကိုငါသံသယမဖြစ်။ ဝတ်စားဆင်ယင်ရန်ပြောသော 'ကျောင်းဟောင်း' ဟုငါလုံးဝခံစားခဲ့ရသည်။ သူနှင့်ငါနှစ် ဦး စလုံးဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်ပေါ့ပေါ့နေသောကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းမတူခဲ့ဘူး၊ ငါနေ့တိုင်းလည်စည်းတွေချခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါကစိတ်ထဲမထားဘူး ... ငါ့ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ခံစားရစေသည်။ ငါဝန်ခံရမယ်, ပါဘူး။ 🙂
ကျွန်တော်သူ့ကို ဆက်၍ စကားပြောနေစဉ်တွင်သူ့အတွက်ကောင်းသောအဖြေမရှိပါ။ သို့သော် ၀ တ်စုံတစ်ခုကပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ်းလှမ်းမှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နောက်ထပ်လေးစားမှု။ တစ် ဦး ကဝတ်စုံကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝတ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ပါ၊ ငွေကိုယူပါ။ နောက်ခန်းအထိခြောက်သွေ့အောင်သန့်ရှင်းရေးထဲထည့်ပါ။ ပျက်စီးခြင်းကဘာလဲ။ ဘယ်သူကမှ ၀ တ်စုံ ၀ တ်ထားတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုရယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကဂျင်းဘောင်းဘီထဲကကောင်လေးကိုပြုံးပြနိုင်တယ်။
အရင်တုန်းကကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ် မဟုတ် သူတို့၏ ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုကြောင့်လူများကိုငှားရမ်းနိုင်သည်။ ဒါဟာကံဆိုးတာပါ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကိုသူတို့ကထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့သူတွေနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတယ်။ အဘယ်ကြောင့်? ငါအရင်ကမစဉ်းစားခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါပေမဲ့ရှေကခေါင်းကိုထိုးတယ်၊ ကြိုးစားနေ။ အဆိုပါဝတ်စုံကိုအတွက်ကောင်လေး (သို့မဟုတ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်) ဖြစ်ခဲ့သည် ကြိုးစားနေ။ ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ပြီး ၀ တ်ဆင်ကို ၀ တ်ဆင်ကာ ၀ တ်ဆင်ကို ၃ ကြိမ်ချည်ပြီးကော်လာတံများကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ နာကျင်လိုက်လေခြင်း! ဒါပေမယ့်သူတို့ကလုပ်ခဲ့တယ်။ အဘယ်ကြောင့်? သူတို့ကြိုးစားနေကြလို့ပဲ။
ငါဒီသီချင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်ကဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတွက်ငါပြန်ဖြေနိုင်မှာပါ။ Seth သည် Auto Sales နေရာရှိ Marketing Ballons အကြောင်းပြောဆိုသကဲ့သို့ဝတ်စုံတစ်ခုကပြုလုပ်သည် သင်ကြိုးစားနေတူသောသငျသညျကြည့်ရှုပါ.
စက်တင်ဘာ 23, 2006 မှာ 9: 44 AM
ငါလုံးဝ Doug သဘောတူသည်။ ငါရောနှောဖို့ကောင်းတဲ့ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနှင့်ထွန်းလင်းဖိနပ် add လိမ့်မယ်။ လူတစ်ယောက်ကောင်းကောင်းသဘောကျအောင်လုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင်ငါ့အတွက်။ သင်၏အလုပ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ကုမ္ပဏီအားလုံလောက်စွာဂရုစိုက်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သောအရာကဘာလဲ။ ဒါဟာစွမ်းရည်နဲ့ ဦး နှောက်အကြောင်းအမြဲမဟုတ်ပါဘူး။ စမတ်ကလူအများကြီးရှိတယ်။ ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်မောင်းနှင်မှုအကြောင်းပါ။
25:2006 pm တွင်စက်တင်ဘာ 3, 58 မှာ
သဘောတူတယ် အစဉ်အမြဲငါဝတ်စုံဝတ်ဆင် (ဥပမာတစ်ခုသာဖော်ပြရန်, ကျောင်းဆင်းပွဲနေ့၌သာအကြောင်းဖြစ်ခြင်း), ဘယ်တော့မှဂုဏ်ယူခဲ့တယျ။ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ပြီးဖောက်သည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေအများကြီးလုပ်ပြီးကတည်းကဝတ်စားဆင်ယင်တာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလာတယ်။ သင်လုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်လေးလေးနက်နက်ပြောနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ် သင်သည်သင်၏ client ကိုလေးစားသော။ မင်းဘာလုပ်နေလဲဆိုတာမင်းစဉ်းစားမိတယ်
နောက်ပိုင်းအစည်းအဝေးများ (သို့မဟုတ်၊ သင့်မိတ်ဆွေ၏ကိစ္စတွင်) တွင်သင်အမြဲဝတ်စားဆင်ယင်နိုင်သည်။ သင် client ကိုဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှပိုပြီးပေါ့ပေါ့!